ရာစုနှစ်အကုန်တွင်အန္တာတိကသည်ရေခဲ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းလျော့နည်းနိုင်သည် ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
ရာစုအကုန်တွင်အန္တာတိကတိုက်သည်ရေခဲ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းလျော့နည်းခြင်းမရှိဘဲကျန်ရစ်နိုင်သည်
ဆီးနှင်းဖုံးလွှမ်းနေသောဝင်ရိုးစွန်းဒေသများသည်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကိုအထိခိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။ အာတိတ်နှင့်အန္တာတိကတိုက်နှစ်ခုလုံးသည်အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲမှုများကိုကြုံတွေ့နေရသည်။ သတ်သတ်မှတ်မှတ်အန္တာတိက ရေခဲ - အခမဲ့ဇုန်ချဲ့ထွင်လိမ့်မယ် ရေသည်အရည်ဖြစ်သဖြင့်၊
ဂျာနယ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်သြစတြေးလျအန္တာတိကဌာနခွဲ (AAD) မှလေ့လာမှုအသစ်အရ သဘာဝရာစုအကုန်ပိုင်းအဖြူရောင်ပရဒိသုတွင်ရေခဲ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်လျော့နည်းနိုင်သည်။ ဒါက ၁၇,၂၆၇ စတုရန်းကီလိုမီတာရှိတဲ့မြေကိုရလိမ့်မယ်.
အနာဂတ်ကာလ၌အန္တာတိကသို့သွားလိုသူများအတွက်ယခုထက် ပို၍ လွယ်ကူလိမ့်မည်။ သို့သော်၊ ဤသွေ့ခြောက်မှုသည်အဘယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သနည်း။ ကောင်းပြီ၊ ငါတို့သိသမျှထဲမှာအထင်ရှားဆုံးတစ်ခုကအဲဒါပဲ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်။ ရေခဲနေသောအရည်ပျော်မှုအားလုံးသည်တစ်နေရာရာသို့သွားရမည်၊
အနှစ်တစ်ထောင်အကုန်တွင်ကမ္ဘာဂြိုဟ်သည်၎င်း၏ပင်လယ်များနှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားလိမ့်မည် သူတို့ကမီတာ 30 စိုက်ပျိုးကြလိမ့်မည်နှင့်အန္တာတိကတိုက်တွင်ဆီးနှင်းများမရှိတော့သည့် အချိန်မှစ၍ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀၀ အဘို့, ဒီတိုးမြှင့်မီတာ ၆၀ ဖြစ်လိမ့်မည် Sinc အေဂျင်စီ သိပ္ပံ fos သိပ္ပံ (ယူနိုက်တက်စတိတ်) မှ Carnegie Institution မှသုတေသီ Ken Caldeira
အန္တာတိကတိုက်ရှိကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ကျန်များအတွက်ကြီးမားသောအကျိုးဆက်များရှိလိမ့်မည် ဇာတိနှင့်ထိုးဖောက်မျိုးစိတ်နှစ်ခုလုံးပျံ့နှံ့သွားလိမ့်မည်။ သဘာဝတရား၌အမြဲတမ်းဖြစ်ပျက်သကဲ့သို့ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက်စစ်ပွဲတစ်ခုရှိလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အချို့မျိုးစိတ်မျိုးသုဉ်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်.
လက်ရှိတွင်တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာမှထောင်ပေါင်းများစွာအထိရေခဲကင်းသောဇုန်များရှိသည် မွေးမြူရေးဒေသများ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်ပင်လယ်စာငှက်များအတွက်, သို့သော်သူတို့သည်လည်းအစုလိုက်ကျောရိုးမဲ့သတ္တဝါများ, မှိုနှင့် lichens ၏မူလနေရာဖြစ်သည်။ အချိန်တန်သော်သူတို့သည်နောက်ဆုံးတွင်တိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကိုလိုနီဖြစ်သွားနိုင်ပြီး၎င်းသည်စိမ်းလန်းစိုပြေမည်လောဟုကျွန်ုပ်တို့အားတွေးတောစေသည်။ ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းသန်း 50 အဖြစ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း » ရာစုအကုန်တွင်အန္တာတိကတိုက်သည်ရေခဲ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းလျော့နည်းခြင်းမရှိဘဲကျန်ရစ်နိုင်သည်